September | 2018 | Border Nepal Buddhi
Limpiyadhura Missing in Map
Posted on September 9, 2018 by bordernepal
Trouble by Indian Construction
Posted on September 6, 2018 by bordernepal
Nepal India Porous Border Must Be Regulated
Posted on September 5, 2018 by bordernepal
‘नेपाल भारत सीमा हृवाङ्ङै भयो, नियमन गर्नुपर्छ’
भारतले एकतर्फी सीमा नियन्त्रण गर्दैछ, ईपीजीको प्रतिवेदनमा के छ ?
२०७५ भदौ २० गते १८:२५ मा प्रकाशित
विश्वमा तीन प्रकारका सीमा व्यवस्थाहरु प्रचलनमा छन् । एउटा खुला, अर्को नियन्त्रित (रेगुलेटेड) र अर्को बन्द सीमा । छोटकरीमा बुझ्दा नेपाल र भारतबीचको सीमाना खुला हो । नेपाल र चीनबीचको सीमा नियन्त्रित र उत्तरकोरिया-दक्षिण कोरियाको बन्द सीमा हो ।
नियमन (नियन्त्रित) व्यवस्था भनेको भिसा, पासपोर्ट परिचयपत्र देखाउनुपर्ने खालको हो । चीनको ३० किलोमिटरसम्म जाँदा पहिले नेपालीलाई भिसा, पासपोर्ट चाहिँदैनथ्यो । १ जनवरी २००७ देखि आईडी कार्ड सिष्टम लगाएको छ ।
अब नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानाको चर्चा गरौं ।
खुला सीमाले प्रशस्त अवसर पनि दिएको छ र हदैसम्मको चुनौती पनि खडा गरिदिएको छ । अवसरको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तत्काल पार गरेर दुबैतिरका नागरिक आफन्त भेट्न जान पाउँछन् । विपदका बेलामा सहयोग लिन सजिलो हुन्छ । उदाहरणको रुपमा ७ वर्षअघि इलामको पशुपतिनगर बजारमा ठूलो आगलागी भयो । त्यहाँ आधा घण्टामा दार्जीलिङबाट दमकल आएर आगो निभायो । इलाम सदरमुकामबाट गएको दमकल भोलिपल्टमात्र पुगेको थियो ।
सिरहाको आँखा अस्पतालमा धेरै भारतीय बिरामीहरु आएर उपचार लिन्छन् । बिराटनगरमा धान काट्नुपर्‍यो भने भारतीय श्रमिक आउँछन्, रोप्नुपर्‍यो भने पनि आइपुग्छन् ।
हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपाल र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भन्नुहुन्छ । नेपालका छोरी भारतका बुहारी भएकी छन् । भारतको छोरा नेपालका ज्वाइँ भएका छन् ।
खुला सीमानाको अर्को पाटो पनि छ । यसलाई अवाञ्छित तत्वले हदैसम्म दुरुपयोग गरेको छ । खुला सीमाका कारण क्रस बोर्डर टेरजिम (सीमापार आतंकवाद) र क्रम बोर्डर क्राइम (सीमापार अपराध) अत्यधिक भएको छ । भारतमा खून खराबा गर्छन् र नेपालमा पसेपछि सुरक्षित हुन्छन् । विध्वंशकारीले नेपालमा योजना बनाउँछन् । भारतमा गएर बम पड्काउँछन् ।
ईपीजीको पाँचौं बैठकमा भारतका तर्फबाट सदस्य रहेका डा. भीसी उप्रेतीले (BC Upreti) ठाडै प्रपोज गर्नुभयो- दुई देशबीचको सीमा नियमन हुनुपर्छ ।
केही वर्षअघि इण्डियाको मोस्ट वान्टेड अब्दुल करिम टुण्डा काठमाडौंको सीतापाइलामा पक्राउ परेका थिए । उनलाई नेपालले अनअफिसियल सुपर्दगी गरेको थियो ।
उनी नेपालमा कसरी प्रवेश गरे त ? खुला सीमा भएकाले म भारतीय हुँ भने, पसे । वास्तवमा उनी भारतमै मोस्ट वान्टेड थिए । खुला सीमाको दुरुपयोग यसरी भइरहेको छ ।
भारतले जहिले पनि भनेको छ कि तेस्रो देशबाट नक्कली भारु आउँछ, अनि नेपालबाट स्थलमार्ग हुँदै भारत प्रवेश गर्छ । बिहारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नितीशकुमारले भनेका थिए – नेपालबाट प्रवेश गरेको नक्कली भारुले बिहारको अर्थतन्त्र चौपट गर्‍यो ।
खुला सीमा दुरुपयोग गरेर मानव तस्करी भएको छ । हिजोआज बम्बईको कोठीमा मात्र होइन नेपालीहरु इराक, इरान अर्जेन्टिनासम्म पुर्‍याइएको छ । भारतको बाटो हुँदै अन्य देशमा लगिएको छ ।
खुला सीमा भएकै कारण लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा सीमा मिचिएको हो । सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनले नेपालको सम्प्रभुता इग्नोर गरेर लिपुलेकको बाटो हुँदै ब्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरे ।
कालापानी नेपालको हो, भारतले अतिक्रमण गरेको भन्ने चीनलाई पनि थाहा छ । तर दुई देशको स्वार्थ मिल्दा चीनले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ताको बेवास्ता गर्‍यो । नेपालको सार्वभौमसत्तामा आघात पार्न चीन पनि पछि पर्दैनरहेछ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो ।
कहिलेदेखि खुला ?
नेपाल र भारतबीचको सीमाना जटिल र विश्वकै लागि अध्ययनयोग्य छ । पहिला नेपाल र भारतबीचको सीमाना बन्द थियो, पछि नियन्त्रित भयो, त्यसपछि खुला हुँदै अहिले त हृवाङ्ङै भएको छ ।
सुगौली सन्धीअघिसम्म नेपाल र भारतबीचको सिमाना बन्द थियो । सुगौली सन्धीपछि विस्तारै श्री ३ महाराजको अनुमति लिएर नेपालमा भारतीय कार्यालयहरु खुल्न थाले ।
त्यसपछि नजादिँदो तरिकाले खुला हुँदै गयो ।
ब्रिटिटिस रेजिमेन्टलाई नेपाली लक्का जवान केटाहरु भर्ना गर्नु थियो । उनीहरुलाई विदामा घर आउन जान सीमाना खुला गर्दै गयो भारतले । त्यसलाई नेपाली प्रशासनले पनि रोकेन ।
भारतलाई नेपाली जडिबुटी लैजानु थियो । चारकोसे झाडी अन्धाधुन्ध काटेर रेलवेको सिल्पर बनाउनुथियो । नेपालले किन लग्यौ भन्न सकेन ।
नेपालबाट पशुका छाला भारतको कारखानामा पेलेर फिनिस प्रोडक्ट बनाउन भारतकै तर्फबाट सीमा खुला हुँदै गयो ।
सीमा खुला गर्न नेपाल र भारतबीच कुनै सन्धी, सम्झौता भएकै छैन । मेरो अध्ययनमा त्यस्ता कुनै लेखोट, सन्धी सम्झौता भएकै छैन । दुबै देशले बेवास्ता गरे । यसरी नै चल्दै चल्दै आयो ।
२०११ वैशाख ६ गतेको राजपत्रमा भारतबाट प्रवासी नेपाली पनि नेपाल आउँदा परमिट लिएर आउनुपर्छ भन्ने लेखिएको छ । अहिलेसम पनि त्यसलाई कुनै निर्णयले काटिएको छैन ।
नेपालको अध्यागमन ऐन र नियमावलीमा नेपालीबाहेक अन्य पक्षलाई राहदानी वा परिचयपत्रविना आवत-जावत गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
नेपाल र भारतको प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले २ वर्षसम्म काम गरे । असार २० गते अवधि सकियो । उहाँहरुले प्रतिवेदन बुझाउन खोज्नुहुन्छ, सरकारले बुझ्न मानेको छैन । प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले एक हप्तामा बुझाउँछौं भनेको थियो । अहिलेसम्म बुझाइएको छैन ।
ईपीजीको प्रतिवेदनमा के होला ? अहिले धेरैलाई चासो छ ।
मलाई जानकारी भएसम्म ईपीजीको पाँचौं बैठकमा भारतका तर्फबाट सदस्य रहेका डा. भीसी उप्रेतीले ठाडै प्रपोज गर्नुभयो- दुई देशबीचको सीमा नियमन हुनुपर्छ । ७० वटा आवागमनका नाका बनाउनपर्छ, परिचयपत्र बनाएर आवत-जावतको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
ईपीजीमा नेपालतर्फका सदस्यहरुले पर्सामा सीमानातिरका वासिन्दाको धारणा बुझ्दा पनि खुला सीमानाले विकृति ल्याएको छ, नियमन हुनुपर्छ भनेर अधिकांशले भने ।
भारततर्फबाट ईपीजीका प्रवक्ताले अहिले आएर किन त्यसो भने होलान् ? भारतका धेरै नेताले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा आधारित छ । सीमामा गडबड भयो भने दुई देशको सम्बन्ध खत्तम हुन्छ, खुला सीमा चलाए सम्बन्ध गल्र्याम-गुर्लम हुन्छ भन्थे । अहिले भारतले नै किन सीमाना नियमन गर्नुपर्छ भन्यो ?
मेरो बुझाइ के छ भने नेपालमा चिनियाँ परियोजनाहरु धेरै आए । ती परियोजना भारतको सीमा नजिक दक्षिण क्षेत्रमा पनि पुगेका छन् । उदाहरणका रुपमा गौतमवुद्ध एयरपोर्ट, भेरी बबई आयोजनालगायत ।
चिनियाँ नागरिक नेपालका जनजातिजस्ता देखिन्छन् । त्यस्ता चिनियाँहरु नेपाली भनेर भारत प्रवेश गरे भने भारतको सुरक्षा निकायको मुटु छाम्छ भनेर भारतले सीमाना नियमन हुनुपर्छ भनेको हो कि ?
इस्लामिक स्टेटका आतंकवादीहरु नेपाल हुदै भारत पस्छन् कि भन्ने भारतलाई चिन्ता छ । नेपाललाई पनि त्यही चिन्ता छ । त्यसैले अब सीमा नियमन गर्नुपर्छ ।
मेरो विचारमा पनि भारतसँगको सीमालाई कुनै पनि हालतमा खुला छाड्नुहुँदैन । पहिले काठमाडौंबाट दिल्ली जाँदा राहदानी लिनुपथ्र्यो, मेरी हजुरआमा दिल्ली जानुपर्दा राहदानी लिनका लागि म नै गएको थिएँ । त्रिभुवन राजपथ बनेपछि भने नेपाल भारत सीमा हृवाङ्ङै भयो । अब यसरी जानुहुँदैन नियमन गर्नुपर्छ ।
इस्लामिक स्टेटका आतंकवादीहरु विश्वब्यापी छन् । कहिले अमेरिकामा, कहिले बेलायतमा हमला गरिरहेका छन् । डेढ वर्षअघि बंगलादेशमा आईएसको हमलामा २० जना मारिए, पाकिस्तानमा ५ जना मारिए ।
इस्लामिक स्टेटका आतंकवादीहरु नेपाल हुदै भारत पस्छन् कि भन्ने भारतलाई चिन्ता छ । नेपाललाई पनि त्यही चिन्ता छ । त्यसैले अब सीमाना नियमन गर्नुपर्छ ।
पहिले नेपाल र भारतबीचको हवाई सीमाना पनि खुला थियो । तर, सन् १९९९ मा नेपालबाट उडेको इन्डियन एयरक्राप्ट अपहरणमा परेर अफगानिस्तानको कान्दाहारमा पुर्‍याइएपछि भारतले आफ्नो जहाजमा आफ्नै सुरक्षाकर्मी राख्न थालेको छ ।
के अब सतह मार्गलाई पनि नियमन गर्नका लागि त्यो हवाइ दुर्घटनाभन्दा ठूलो घटना पर्खेको हो ? त्यसैले त्यस्तो दुर्घटनाअघि नै खुला सीमानालाई नियमन गर्दै जानुपर्छ । सीमालाई नियमन गरेर क्रमिक रुपमा सीसीटीभी राख्नुपर्छ ।
तर, नेपालले चाहे पनि नचाहे पनि नियमन सुरु भइसकेको छ । नियमन गर्ने काम भारतले नै सुरु गरेको छ । भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा ४५ हजार एसएसबी खटाएको छ । यो हिसाबले एक किलोमिटर क्षेत्रमा २४ जना एसएसबी खटिन्छन् ।
हाम्रो नेपालमा ६ हजार जना सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । यस हिसाबले एक किलोमिटरको दूरीमा ३ जनामात्रै पुग्छ । भारतमा बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट २०० वटा छ भने नेपालमा ९० वटामात्रै छ ।
उनीहरुको सीमाको १ किलोमिटर नजिकै पोस्ट छ नेपालको २ किलोमिटर पर छ । नेपाली सुरक्षाकर्मी छाप्रोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विदेहमा अन्य देशहरुमा पनि खुला सीमाना छ । क्यानडा र अमेरिकाको सीमा पनि खुला हो । तर त्यहाँ आवतजावत गर्दा परिचयपत्र देखाउनुपर्छ ।
दुई देशको सीमा सुरक्षालाई ध्यान दिने हो भने अबको १०/१५ वर्षपछि सिमानामा काँडेतार नै लगाउनुपर्छ । तर १८० ठाउँमा आवागमनको नाका हुनुपर्छ ।
यति गर्नका लागि ठूलो दुर्घटना, इस्लामिक स्टेटको आक्रमण पर्खिनु हुँदैन । भारतीय जाली नोट नेपालबाट भारत गएर भारतको टाउको नदुखाउन गर्नुपर्छ ।
(बुधबार काठमाडौंमा आयोजित खुला सीमाना : अवसर र चुनौती विषयक कार्यक्रममा श्रेष्ठले दिएको मन्तव्यको सारसंक्षेप)